Office 2016 အတွက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ Update ကို Microsoft ကထုတ်ပြန်ခဲ့သည် ငါက Mac ပါ
Microsoft မှ Office 2016 အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
ယရှေု Arjona Montalvo | | Mac OS X ကို, NOTICIAS, Mac အတွက်အခြားအက်ပလီကေးရှင်းများ
အောက်တိုဘာ ၃၁ ရက် Microsoft က သင်၏အက်ပလီကေးရှင်းများအားလုံးကိုမိုက်ကရိုဆော့ဖြင့်ထည့်သွင်းထားသည် Office ကို 2016, သင်တို့ကိုပိုမိုပေး၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူ လုံခွုံရေး. အထူးသ, update ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းကိုတစ် ဦး အပေါ်အာရုံစူးစိုက် အားနည်းချက် အဲဒါကိုလုပ်နိုင်ပါတယ် ဝေးလံခေါင်သီကုဒ်ကွပ်မျက်မှတဆင့်အန္တရာယ်ရှိတဲ့တိုက်ခိုက်မှုသီးခြား Office ဖိုင်အမျိုးအစားတခုကိုဖွင့်ပြီး။ ဒီအပ်ဒိတ်ကနေ application များသက်ဆိုင်သည် Microsoft Word, PowerPoint, Excel နှင့် Outlook.
ဒါ့အပြင် Microsoft လည်းပါဝင်သည် ရင်းမြစ်အသစ်များ ဂျပန်နှင့်တရုတ်စာများအတွက် default ။ ရှိပါတယ် တိုးတက်မှုများ Microsoft တည်းဖြတ်သူ 'Visual Basic'Microsoft မှအသစ်တင်သည့်အရာများအားလုံးကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
1 Outlook နဲ့:
တရုတ်နှင့်ဂျပန်အတွက်မူရင်းဖောင့်အသစ်များ။ ဤတရုတ်နှင့်ဂျပန်စာလုံးများ သဘောတား Mac အတွက်, သူတို့ကခေတ်မီ, စုစည်းနှင့်ပိုကောင်း - ပြုမူပုံပန်းသဏ္ဌာန်ရှိသည်ဖို့ updated ပါပြီ။
Visual Basic Editor တိုးမြှင့်မှုများ။ သင်ယခု module များ၊ ကိုးကားချက်များနှင့် Visual Basic Editor တွင် debugging shortcut များကိုထည့်နိုင်သည်။
အောက်ပါတို့ပါ ၀ င်သော software မွမ်းမံမှုများ -
တိုးတက်သော VoiceOver အထောက်အပံ့ ပြက္ခဒိန် function ကိုအတွက်အချိန်။
La မက်ဆေ့ခ်ျစာရင်းယခုမှန်ကန်စွာပြသ သင်ဖိုလ်ဒါများပြောင်းသောအခါ Reading Pane ကိုပိတ်ထားသည်။
အတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သော 'သတိပေးချက်များ' လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း CPU ကိုသုံးစွဲမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်.
ပိုမိုကောင်းမွန်သောအသုံးချမှု အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအော်ပရေတာများ, အင်္ဂလိပ်ထက်အခြားဘာသာစကားများအတွက်။
Visual Basic Editor Enhancements။ သင်ယခု module များ၊ ကိုးကားချက်များနှင့် Visual Basic Editor တွင် debugging shortcut များကိုထည့်နိုင်သည်။
နဂိုမူလစာလုံးများ တရုတ်နှင့်ဂျပန်ကနေ။ ဤအတွက် Word for Mac ရှိတရုတ်နှင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုခေတ်မီ။ စည်းလုံးညီညွတ်သောပုံစံဖြင့်ခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ထားသည်။
ရှာပါ / အစားထိုးပါ Track Changes ကိုဖွင့်သောအခါလာမည့်ကိုက်ညီသောစကားလုံးသို့ပြောင်းရန်ပြင်ဆင်သည်။
မေးလ်ကိုအသုံးပြုသောအခါပေါ်ပေါက်လာသောဖြေရှင်းချက်ပြashesနာများသည် Outlook နှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းသည်။
Header / Footers၊ စာမျက်နှာနံပါတ်၊ စာမျက်နှာအရေအတွက် နှစ်ခုဂဏန်းထက်သာ။ ကြီးမြတ်နံပါတ်များကိုပြသနိုင်ဖို့ fixed ။
နဂိုမူလစာလုံးများ တရုတ်နှင့်ဂျပန်ကနေ။ Mac အတွက် Excel အတွက်တရုတ်နှင့်ဂျပန်ဖောင့်များကိုခေတ်မီ။ စုစည်း၍ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံဖြင့်ခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ထားသည်။
တိုးတက်လာသောထောက်ခံမှု ပြင်ပ application မှ paste.
အ scrollbars Scroll bar ဆက်တင်ကိုမှန်ကန်စွာလေးစားပါ OS X ကို.
နဂိုမူလစာလုံးများ တရုတ်နှင့်ဂျပန်ကနေ။ Mac အတွက် PowerPoint ရှိဤတရုတ်နှင့်ဂျပန်စာလုံးများကိုခေတ်မီ။ စည်းလုံးညီညွတ်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောပုံစံဖြင့်ခေတ်မီအောင်ပြုပြင်ထားသည်။
အ နောက်ဆုံးသတင်းများရရှိနိုင်ပါသည် Office 2016 ရှိပြီးသားသူများအတွက် Mac မှာ install လုပ်ထားပြီးပြီဆိုလျှင်၎င်းမှတဆင့်ရနိုင်သည် မိုက်ကရိုဆော့ဖ်အလိုအလျှောက်မွမ်းမံသည့်ကိရိယာ.
ကံမကောင်းစွာဖြင့်၊ ယခုအချိန်တွင်ဤ update သည်ပြinနာများကိုဖြေရှင်းခြင်းရှိ၊ မရှိမရှင်းလင်းပါ Office ကို 2016 operating system အသစ်နှင့်အတူအသုံးပြုသူများအဘယ်သို့ဆိုင်နေကြသည် OS X ကိုအယ်လ် Capitanကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Miguel Ángelကမှတ်ချက်ချသည် ဤဆောင်ပါးကျွန်ုပ်တို့သိသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် Soy de Mac ၌ကျွန်ုပ်တို့အားသင့်အားအသိပေးမည်။
ဒါ့အပြင်ရက်အနည်းငယ်အကြာ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်သည် OS X El Capitan တွင် Outlook ပြproblemsနာများအတွက် patch တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်ပိုမိုတိကျစွာအတူ Microsoft Office 2011 ။ ဆိုလိုတာကမိုက်ကရိုဆော့ဖ်ကဘက်ထရီတွေချနေတယ်.
ရင်းမြစ် [Microsoft က]
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Apple » NOTICIAS » Microsoft မှ Office 2016 အတွက်လုံခြုံရေးအဆင့်မြှင့်တင်မှုတစ်ခုကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်
Apple သည် Autism, Epilepsy နှင့် Melanoma အတွက် ResearchKit လေ့လာမှုအသစ်များကိုကြေငြာခဲ့သည်
Apple Music သည်မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုရန်အတွက် Twitter အကောင့်တစ်ခုဖွင့်သည်